नेपाल लाइफलाई उछिन्न कसैको पुगेन हुति, युनियनले कुन-कुनलाई दियो टक्कर (हेर्नुहोस् कसको कति ?) » aarthikplus
नेपाल लाइफलाई उछिन्न कसैको पुगेन हुति, युनियनले कुन-कुनलाई दियो टक्कर (हेर्नुहोस् कसको कति ?)
२०७८ श्रावण ६ गते, बुधबार ११:२५ मा प्रकाशित
काठमाडौं । जीवन बीमा तर्फ बीमा शुल्क आर्जनमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले पहिलो स्थान कायमै राखेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा जीवन बीमा कम्पनीहरु ४१ अर्ब ९३ करोड प्रथम बीमा शुल्क तथा नविकरण अन्तर्गत ७८ अर्ब ३९ करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् ।
बीमा समितिका अनुसार गतवर्ष सबैभन्दा बढी बीमा शुल्क आर्जन गरेर नेपाल लाइफले आफ्नो पहिलो स्थान कायम राखेको छ । नेपाल लाइफले ८ अर्ब ८२ करोड प्रथम बीमा शुल्क आर्जन गरेका छ भने नविकरण अन्तर्गत २३ अर्ब ९९ करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ ।
यो पटक प्रथम बीमा शुल्क आर्जनमा नेशनल लाइफ छ । नेशनलले प्रथम बीमा शुल्क अन्तर्गत ४ अर्ब ३ करोड आर्जन गरेको छ भने नविकरण अन्तर्गत ८ अर्ब १० करोड आर्जन गरेको छ ।
नयाँ कम्पनीमा युनियन लाइफले पुरानालाई प्रथम बीमा शुल्कमा टक्कर दिएका छ । प्रथम बीमा शुल्क आर्जनमा युनियन चौथो स्थानमा रहेको छ । युनियनले ३ अर्ब १८ करोड प्रथम तथा नविकरण अन्तर्गत ३ अर्ब ५७ करोड आर्जन गरेको छ ।
पुराना कम्पनीमा सरकारी लगानीको ७६ करोड प्रथम तथा नविकरणबाट ६ अर्ब ६५ करोड संकलन गरेको छ । यस्तै,३ अर्ब ५६ करोड प्रथम बीमा शुल्क र नविकरणबाट १३ अर्ब ५८ करोड गरेको छ ।
मेटलाइफले १ अर्ब ४५ करोड प्रथम तथा नविकरणबाट ३ अर्ब ५७ करोड संकलन गरेको छ । एशियन लाइफको २ अर्ब १३ करोड प्रथम तथा नविकरणबाट ३ अर्ब ७८ करोड संकलन भएको छ ।
सुर्या लाइफले १ अर्ब ९७ करोड प्रथम बीमा शुल्क तथा नविकरणबाट २ अर्ब २९ करोड संकलन गरेको छ । गुरासले १ अर्ब ६८ करोड प्रथम तथा नविकरणबाट २ अर्ब संकलन गर्न सफल भएको छ ।
प्राइम लाइफले १ अर्ब ६८ करोड तथा नविकरण अन्तर्गत २ अर्ब ६३ करोड संकलन गरेको छ ।
नयाँ कम्पनीमा आइएमई लाइफले १ अर्ब ५९ करोड प्रथम तथा १ अर्ब ३९ करोड नविकरणबाट संकलन गरेको छ । ज्योति लाइफको १ अर्ब ८४ करोड प्रथम तथा नविकरणबाट १ अर्ब ३४ करोड रहेको छ ।
सन नेपालको ९१ करोड प्रथम तथा ८९ करोड नविकरण अन्तर्गत संकलन भएको छ । रिलायन्सको १ अर्ब ४८ करोड प्रथम तथा नविकरण अन्तर्गत १ अर्ब ९ करोड रहेको छ ।
रिलायवलको २ अर्ब २१ करोड प्रथम तथा नविकरणबाट ७८ करोड संकलन भएको छ । सिटिजन्सको २ अर्ब २ करोड प्रथम तथा नविकरणबाट १ अर्ब ४९ करोड संकलन गरेको छ ।
सानिमा लाइफले १ अर्ब ६८ करोड प्रथम तथा नविकरणबाट ६७ करोड संकलन गरेको छ । प्रभु लाइफले ८९ करोड प्रथम बीमा शुल्कबाट तथा नविकरणबाट ५६ करोड संकलन गरेको छ । महालक्ष्मी लाइफले ७५ करोड प्रथम अन्तर्गत र नविकरणबाट ३१ करोड संकलन गरेको छ ।